Literature – Nepal Reports
अर्जुन गिरी- हिउँ जमेर चट्टानै बनेको थियो । हावा मुटु नै छुने चिसो । तापक्रम माइनस १० डिग्री सेल्सियस थियो । चिसोले सबै जमेको थियो । तर, २३ मिनेट त्यहाँको माहोल तात्यो । यो सन्दर्भ ५ हजार ४ सय १६ मिटर अग्लो थोरङ्ला भन्ज्याङको हो । सन् २०१६ अक्टुबर २७ तारिख । डिजे छेवाङ शेर्पाको […]
"ईमरान खान र तहरीक-ए-ईन्साफ बाट पाकिस्तानिहरु ले धेरै आश राखेका छन्, बुझ्यौ राजन। जतिबेला राम्रा राष्ट्रिय नीति भएका पार्टीहरु र स्वच्छ आचरण भएका नेताहरु हामी कहाँ थिएनन् हामीले सेनाकै सत्ता रुचायौं। विकास कार्यमा सेनाले भ्रष्टाचार नगर्ने हुनाले गर्दा नै हामी निकै हदसम्म संतुष्ट भएका थियौं। नत्र केवल नराम्राहरु मध्ये चुन्ने अवसर पाउनु कुनै पनि राष्ट्र र जनाताका निम्ति दुर्भाग्य हो।" उसले यति भनि नटुंग्याउँदै मैले आफ्नो देश सम्झें। दुर्भाग्यहरुको कस्तो अनुपम् मेल!
म (लघु कथा)
November 2, 2014 Bigyan Kandel
म परैबाट उनिहरुलाई हेरिरहेकी थिएँ, मुस्कुराउँदै। उनीहरु पनि आफ्नै धुनमा खेलिरहेका थिए, रमाउंदै। उनिहरुलाई हेर्दै म यतिसम्म रोमाञ्चित भएछु, मलाई नि कसैले "आमा" भनेर बोलाइदिए हुन्थ्यो जस्तै लाग्न थाल्यो। मैले बिर्सिदिएँ आफैलाई र डुब्न थालेँ सपनाको सन्सारमा। भेटेजतिका कपडाहरु बटुलेर डल्लो बनाएं। कुर्था भित्र हालेर पेट बनाएँ - गर्भवती महिलाको झैं। ऐनामा पेट निकै सुहायो।
साताको साहित्य पुरस्कार कवि मुकुन्द प्रयासलाई
November 1, 2014 Bigyan Kandel
यस वर्षको साताको साहित्य पुरस्कार धनकुटाका कवि मुकुन्द प्रयासलाई प्रदान गरिएको छ। कवि, गजलकार निष्प्रभ सजिको सम्पादनमा अष्ट्रेलियाबाट संचालित हुने अनलाइन - साताको साहित्य डट कममा वर्ष भरि प्रकाषित रचनाहरु मध्ये बाट उत्कृष्ट एक लाई सो पुरस्कार प्रदान गरिन्छ।
अछाम गजल महाेत्सब २०७१ काे अवसरमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय गजल प्रतियोगितामा दिर्गराज गिरी 'प्रियसी' प्रथम भएका छन्। अछाम गजल मञ्चले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा सन्तोष सुवेदि र रविन स्वप्निल ले भने क्रमश: दोस्रो र तेस्रो पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भए।
October 3, 2014 Bigyan Kandel
जब कलममा पनि धार हुनेछ , तरवार आफै होसीयार हुनेछ ! -कमल संघर्ष